ငါးသယံဇာတ တိုးပွားရေးအတွက် မြစ်သာမြစ်အတွင်းသို့ ငါးကောင်ရေ ၁၁ဝဝဝဝ စိုက်ထည့် - Yangon Media Group
ငါးသယံဇာတ တိုးပွားရေးအတွက် မြစ်သာမြစ်အတွင်းသို့ ငါးကောင်ရေ ၁၁ဝဝဝဝ စိုက်ထည့်
ငါးသယံဇာတတိုးပွားရေးအတွက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကလေးခရိုင်ငါး လုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ မြစ်သာမြစ်အတွင်းသို့ငါးသား ပေါက်ကောင်ရေ ၁၁ဝဝဝဝ ကို သြဂုတ် ၂၉ ရက် နံနက်က စိုက်ထည့်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
ကလေးခရိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦး စီးဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးဦးစိုးမြင့် သိန်းဦးဆောင်၍ ခရိုင်အဆင့်တာ ဝန်ရှိသူများ၊ ကလေးမြို့နယ်စီမံခန့်ခွဲ ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးညီညီနှင့် မြို့နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ မြို့နယ်အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့များ၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ၊ ဆရာ/ဆရာမများသည် ကလေး မြို့နယ်အတွင်း ဖြတ်သန်းစီးဆင်းသည့်မြစ်သာမြစ်အတွင်း ငါးသား ပေါက်အကောင် ၁၁ဝဝဝဝ ကို စိုက်ထည့်ပေးကြသည်။
”ကျွန်တော်တို့မြစ်သာမြစ်နဲ့ အခြားမြစ်ချောင်းအင်းအိုင်တွေမှာ အခုလိုမိုးရာသီကာလရောက်တိုင်း ငါးသယံဇာတပြန်လည်စိုက် ထည့်တာတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ငါးသယံဇာတဆိုတာလည်း ကျွန် တော်တို့တာဝန်ရှိတွေချည်းထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်လို့ရတာမ ဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုအားလုံး ပါဝင်ပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်သွား ဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်း အသိပညာပေးလုပ်ငန်း တွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်”ဟု ကလေးခရိုင်ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှ ခရိုင်ဦးစီးမှူးဦးစိုးမြင့်သိန်းက ပြောကြားသည်။
ကလေးဒေသသည် မြစ်ချောင်း အင်းအိုင်ပေါများသော ဒေသ ဖြစ်ပြီး ရေပျော်သားငါးပုစွန်ပေါ များသောဒေသဖြစ်ကာ ယခုအခါကလေးဒေသမြစ်ချောင်း အင်းအိုင်များခန်းခြောက်မှုများရှိလာခြင်းနှင့် မြစ်ချောင်းအင်းအိုင်များအတွင်း ဘက်ထရီရှော့ခ်ရိုက် ငါးဖမ်းခြင်း၊ အဆိပ်ဆေးချငါးဖမ်းခြင်းများ ကြောင့် ရေပျော်သားငါးပုစွန်ရေသယံ ဇာတရှားပါးလာသည်။
ကျောက်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင် အချို့ သတ်မှတ်ကျင်းထက် ပိုထုတ်နေ၊ ပြည်နယ်အစိုးရ ဘာမျှ မသိဟု မထင်ရန??
သုံးခွမြို့နယ်အနီး ပင်လယ်ပြင်တွင် ခါးကျိုးပြီး သောင်တင်နေသည့် လူမဲ့နိုင်ငံခြား ကုန်တင်သေ?
ငါးကြီးကြီးများကို ဖမ်းကြော်ခြင်းဖြင့် အရှိန်မြှင့် ဆောင်ရွက်သင့်
၂ဝ၁၉ ခုနှစ် အော်စကာဆုအတွက် ဆန်ခါတင်စာရင်း ထွက်ပေါ်လာ
ကရင်ပြည်နယ်တွင် မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ကျပ်သိန်းပေါင်း ခုနစ်သောင်းကျော်ကို စတင်
၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ရေးမြို့နယ် ပင်လယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွင် သေမှုသေခင်းနှင့် လူသတ်မှုပေါင်း ၄၇ ??